नायिका शुष्मा कार्कीले बिबाहा गरिन ?
Sunday, 02.22.2015, 09:46pm (GMT6.5)
शुक्रबार राजधानीको अनामनगर स्थीत एक घरमा तामझामका साथ् उनले बिबाह गरेको खबर बाहिर आएको छ । अमेरिका निवासी आकाससंग बुबाको कर कापमा नायिका शुष्मा कार्कीले बिबाह गरेको खबर र तस्बिर सार्बजानिक भएको छ ।
हट एण्ड बोल्ड नायिका भन्ने बितिक्कै नेपाली चलचित्र नगरीमा मुखैमा झुन्डिने अर्को नाम हो नायिका शुष्मा कार्की । बेला बखतमा चर्चामा आईरहने यी नायिका अहिले भने निकै शान्त छिन, र फेरी अहिले उनको एकाएक चर्चा सुरु भएको छ । जब कुरा निस्कियो उनले स्वयम्बर गरेको तस्बिर एकाएक सार्बजानिक भएपछी ।
नायिका शुष्मा कार्कीले बिबाह गरेको तस्बिर सार्बजानिक भएपछी लाग्यो उनले बिबाह गरेकी जस्तो ।फोटो बाट प्रष्ट देखिन्छ उनले बिबाह गरेको । तर बिबाह गर्दा केटा को थियो त ? के उनकै प्रेमी हो ? या अरु कोहि ? यो बारेमा तस्बिरमा प्रस्ट थिएन ।
थप तस्बिर र माहोल हेर्दा उनले बिबाह गरेको खबर रिएल लाईफमा नभई रिल लाईफमा रहेछ । उनले हाल छायांकन भईरहेको चलचित्र "चलेछ बतास सुस्तरी" को एउटा सिनमा बिबाह गरेको देखिएको छ । अरुण खड्का प्रोडक्सन र क्रश फ्रिन्गर्स ईन्टरटेन्टमेन्टको ब्यानरमा अरुण खड्का र प्रदिप भारद्वाजले निर्माण गरेको यस चलचित्रलाई निर्देशक द्वए सब्बु सुबेदी र अनिला खड्काले निर्देशन गरिरहेका छन ।
चलचित्रमा हरि लामाको छायांकन कविराज गहताराज र रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी रोशन श्रेष्ठको दोन्द रहेको छ । ४ ओटा गित रहेको यस चलचित्रमा सन्तोष रजौरे र बिकास चौधरीको संगीत रहेको छ । चलचित्रमा स्वोरुप राज आचार्य, डेबिट शंकर, प्रबिशा अधिकारि, आकाक्षा बश्याल सन्तोष राजौरेको आवाज सुन्न सकिने छ । नायक प्रमोद भारद्वाज, नायिका शुष्मा कार्की, आकास पल, निशा नेपाल, हेमन्त बुढाथोकी, पुष्प लुईटेल लागायाताकाको अभिनय चलचित्रमा रहेको छ । चलचित्रको हाल राजधानी आशपसका क्षेत्रहरुमा छायांकन भईरहेको छ । केहि दिन अघि मात्र चलचित्रको टाईटल गित लाई कालिन्चोक मन्दिर आशापास र दोलखामा खिचेर आएको
यस युनिट चलचित्रको क्लाईमेक्स छायांकनको लागि भने पोखरा जाने तयारीमा रहेको छ ।